Daawo Sawirada James Rodriguez oo lagu soo dhaweeyey kooxdiisa Cusub ee Bayren Munich | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Sawirada James Rodriguez oo lagu soo dhaweeyey kooxdiisa Cusub ee Bayren Munich
(12-7-2017)) Xiddiga James Rodriguez ayaa ka tegay kooxdiisa Real Madrid waxaana uu qaab amaah ah ugu wareegay kooxda Bayern Munich, waxaana sidaas ku dhawaaqday inay heshiis amaah 2 sannadood ah kula wareegeen kooxda Munich.
Kooxda Bayern Munich ayaa xiddigii khadka dhexe ee Real Madrid James Rodriguez saxiixiisa ku garaacay kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-Germain oo si weyn u doonayay ciyaar yahankan, waxaana Bayern ay heshiiska amaahda ku bixisay 10 million uero, iyadoo kuwada iibsan karta marka la gaadho 2019 35.2 million uero sida ay Bayern sheegtay.
Heshiiska uu James Rodriguez ugu wareegay Bayern Munich ayaa ah mid lama filaan ah iyadoo kooxaha Bayern iyo Real Madrid ay ku heshiiyeen inuu xiddiga reer Colombia uu 2 sannadood amaah ku joogo Allainz Arena iyadoo kooxda haysata horyaalka Bundesliga ay ikhtiyaar u leedahay inay iibsato markaas oo bixinayso adduun lacageed oo gaadhaya 35.2 million uero.
Xiddiga reer Colombia oo boos joogta ah ka waayey kooxda Zinedine Zidane ayaa xagaagan doonayay inuu isaga dhaqaaqo Bernabeu, waxaana si xoogan loola xidhiidhinayay kooxaha Manchester United iyo PSG oo loo arkayay inay ugu cadcad yihiin saxeexiisa, xitaa waxaa lala xidhiidhinayay kooxda heysata horyaalka Ingiriiska ee Chelsea.
Balse si lama filaan ah waxaa dhowrkii saacadood ee ugu danbeysay soo baxday in Bayern Munich ay wadahadalo horumar leh la gashay Real Madrid waxaana ay heshiis amaah ah kula wareegeen xiddiga sida weyn loo qiimeeyo ee reer Colombia.
Warbixin ay soo saartay Bayern Munich ayaa lagu yiri: “FC Bayern Munich iyo Real Madrid waxa ay ka heshiiyeen saxeexa xiddiga reer Colombia James Rodriguez maanta oo Salaaso ah. Labada kooxood waxa ay isku raaceen heshiis amaah 2 sannadood ah oo ku eeg 30-ka June 2018 iyadoo markaas ay Bayern Munich ikhtiyaar u leedahay inay iibsato.
Xiddigii hore ee kooxaha FC Porto iyo Monaco ayaa saftay 77 kulan oo La Liga ah seddexdii xilli ciyaareed ee uu joogay kooxda Real Madrid, waxaana uu mudadaas dhaliyey 22-gool.